GAM gọnarịrị itinye aka na nnapụta Terra CoinWorldMap
GAM gọnarịrị itinye aka na nnapụta Terra
Mee 13, 2022 Binance, CBDCA, Defi
Na Tọzdee, a na-ekesa akwụkwọ akụkọ adịgboroja nke onye njikwa akụrụngwa GAM Holding nyere, na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ na-akparịta ụka iji tinye ego n'etiti ijeri $ 2 na $ 3 ijeri iji tụlite Do Kwon na-agbada DeFi venture Terraform Labs. Na Fraịde, ụlọ ọrụ Switzerland wepụtara nkwupụta ịgọnarị ebubo niile ahụ ma kwupụta mmalite nke nyocha gọọmentị.
AccessWire bipụtara akụkọ ụgha akpọrọ "GAM ejidere nwere ike ịghọ onye ọcha nke Terra" n'elekere 11:00 nke ụtụtụ n'oge London. O kwuru na a na-atụ anya GAM itinye ego dị ukwuu na gburugburu ebe obibi iji weghachi peg nke Terraform Labs stablecoin TerraUSD (UST) na dollar US.
Okwu adịgboroja sitere na GAM Holding CEO Peter Sanderson gụnyere: "Anyị kwenyesiri ike na gburugburu Terra. Mgbe ihe omume swan ojii na-eme n'ahịa, ohere na-eto eto. Anyị na-ahụ ohere na ọrụ UST na nso nso a ma na-aga n'ihu na-ahụ nkwa na atụmatụ sara mbara nke Terra. "
Ozi ahụ gwakwara ndị na-achọ ozi ndị ọzọ ka ha kpọtụrụ onye nnọchi anya mgbasa ozi GAM, Charles Naylor, onye nwere ike nweta ozi ole na ole n'ime awa na-esote. Ụfọdụ mgbasa ozi welitere akụkọ ụgha ahụ - Otú ọ dị, n'oge e bipụtara ya, CoinGape dezigharịrị isiokwu ahụ nke ọma iji gosipụta ezi ihe dị mkpa nke ihe omume (enweghị ihe ọ bụla).
N'echi ya, GAM wepụtara nkwupụta nkwenye ya: "Enweghị eziokwu na akụkọ a na GAM enyeghị akwụkwọ akụkọ ... Anyị na-enyocha isi mmalite akụkọ a na otú e si wepụta ya."
E wepụrụ Terra
Cheta na algorithmic stablecoin UST dara n'izu a, na-eme ka a na-ere ọtụtụ ijeri dollar na ahịa cryptocurrency. Nnukwu mgbanwe dị ka Binance na Upbit wepụrụ ọrụ ahụ na ndepụta ahụ. N'ezie, Terra anwụọla kpamkpam.
Na mmetụta ripple a na-enwetụbeghị ụdị ya, nnukwu stablecoin, Tether, tụfuru mkpọ ya na Thursday, na-ere ahịa na $ 0,96. A ga-akwadorịrị Tether 1:1 site na dollar US n'ụdị ego, ụgwọ ụlọ akụ (n'ezie agbụ gọọmentị US), mgbazinye ego mgbazinye ego na ntinye ego ndị ọzọ. Akwụkwọ azụmahịa (ụgwọ ụlọ ọrụ) na-eme ihe dị ka ọkara nke akụ na-akwado USDT, agbanyeghị Tether na-anọgide na-eju anya nzuzo banyere mmalite na gradation nke ndị a akụ. N'ọnwa Nọvemba, Protos kpughere na e nyela naanị ndị na-ere ahịa Tether nnukwu ego.
Ka ọ dị ugbu a, Tether eweghachila peg ya na $1. Agbanyeghị, nkenke ihe omume a kpatara nnukwu ọgbaghara na gburugburu ebe obibi, ọbụlagodi maka ndị egwuregwu ụlọ ọrụ dịka onye ode akwụkwọ ego US Janet Yellen. N'okwu ya na kọmitii na-ahụ maka ọrụ ego nke Ụlọ, Yellen kwupụtara nchegbu banyere mmetụta nke stampụ kwụsiri ike dị ka Terra nwere ike inwe na ego dijitalụ ndị ọzọ nwere dollar.
Yellen kwuru na ya kwenyere na $ 2 trillion cryptocurrency ahịa ezughị oke iji mepụta ihe ize ndụ sistemu, mana iwu ndị ọzọ nwere ike chebe megide mkpọka ahịa ahịa n'ọdịnihu.
"Agaghị m akọwa ha n'ụdị dị otú ahụ dị ka ihe iyi egwu n'ezie maka nkwụsi ike ego, ma ha na-eto ngwa ngwa ma na-ebute otu ihe ize ndụ ndị anyị maara kemgbe ọtụtụ narị afọ na ụlọ akụ na-agba ọsọ."
US Treasury na-arụ ọrụ na akụkọ ga-ewepụta usoro dị otú ahụ, nke ga-agụnye ịkọ aha ego dijitalụ nke ụlọ akụ etiti (CBDCA) iji belata ihe ize ndụ n'ọdịnihu.
Onye na-egwuputa ihe na Rọshịa na ndị US Treasury na-arụrịta ụka
Kedu ihe na-esote maka gburugburu ebe obibi Terra?
Jack Dorsey Block okpukpu abụọ na BTC
Cryptocurrencies ga-agbake n'afọ a
UK kwadoro stablecoins n'ụzọ iwu kwadoro
Nleba anya zuru ụwa ọnụ nke ahịa crypto dị nso?
Stablecoins tụfuru ijeri $ 7 na Mee